ढोकाबाट सुड् डी भन्दै आएर एकैछिन भएनी काखमा टाउको राखी पल्टन्थ्यो,२ महिना बितिसक्दा अवस्था झन्झन् नाजुक – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १७, २०७७ समय: २०:५३:५५
चितवन।।काठमाडौँ जिल्लाको कपन स्थित चुनिखेलमा पौष १९ अनिसा कुमाल र कन्चन तिमल्सिनाले बिबाह गरेका थिए तर केटीको माइती प’क्षको का’रण कन्चनले बि’ष से’वन गरेका हुन् । ।जुन बिबाह गर्ने दम्पती चि’तवन जिल्ला का’लिका न’गरपालिका वडा न:६ की क’न्चन ति’मल्सिना र अनिसा कुमाल रहेका छन ।दुवै जना मि’लापत्रमा घरमै बि’बाह गरेका थिए । के’टिपक्षको मानिसले दुबै’को स’म्बन्ध स्वी’कार गर्छौ भनेर बोलाएर चौ’कीमा लगी कु’टपिट ग’राएकोले उनि यो पि’डा स’हन न’सकेर यु’वकले बि’ष से’वन गरेको बताएका छन ।
आज कन्चनलाई हस्पिटल राखिएको ५८ दिन पुगेको छ भने भेन्टिलेटर मा राखिएको १८ दिन। सेतो रगतको मात्रा निकै नै कम छ। ज्वरो केही गर्दा नि घट्दैन। एकछिन पानी पट्टि लाउँदै रगत चढाउँदै गर्नु परेको छ। आज हेरे नि उस्तै भोलि हेरे नि उस्तै, २ महिना बिस्ताराको बिस्तारा मै भएर शरीरका पछाडी भागमा घाउ हुन थालेको छ। एउटा न एउटा समस्या थपिइरहेकै छ।
घरमा अरु २ छोरा नि छन्,उनीहरु त हाँस्ने बोल्ने हिँड्ने खाने गर्न सक्छन् तर मेरो कन्चन आज २ महिना सम्म नि बिस्तारामै छ।म बाहिर बसिराको हुन्छु, आइसियु बाट कतै छोरोले मम्मी भनी बोलाउँछ कि!! कसैले सुड्डी भनेको सुने भने उसकै झल्को आउँछ। कतैबाट आएर घरमा पस्दा मलाई सुड्डी भन्दै आउँथ्यो, जति नै ठुलो भएपनि एकछिन मेरो काखमा टाउको राखी पल्टन्थ्यो। उसलाई पहेंलो लुगा धेरै मन पर्थ्यो। अहिले कसैले पहेंलो लुगा लगाइ हिँडेको देेख्दा, छोरोको रुप देख्ने गर्छु। म मन थाम्नै सक्दिन।
कन्चनकी आमा खाना खान बस्छिन् तर १ गाँस नि निल्न धौधौ पर्छ उनलाई। मेरो बाबुलाई यस्तो मन पर्छ, यस्तो खान्थ्यो भन्दै झलकले आँखामा विगतका घटना भर्छिन्। ” छोरो एकपटक होसमा आउँदा, मम्मी मलाई मासु र भात खान मन लागेको छ भनेको थियो। ”
कन्चनका साथीभाइ थुप्रै छन्,कारण उनी मिजासिला मान्छे थिए। उनीहरू आउँछन्, र भन्छन, “मम्मी हामी नि तपाईंको छोरा नै हौँ नि!! नआत्तिनु ” यस्तो सुन्दा कन्चनकी आमा झनै विक्षिप्त बन्छिन्, उनीहरू सँगै हिँड्ने डुल्ने रमाइलो गर्ने गर्थे। कन्चकी आमा भन्छिन्, ” साथमा नहुनेकै बढी झल्को र माया लाग्ने रहेछ। कहिले निको होला मेरो बाबुलाई । ”